Eedeysane Faarax Cali Nuur oo qirtay inuu dilay marxuum Mursal Cumar Cismaan (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Eedeysane Faarax Cali Nuur oo qirtay inuu dilay marxuum Mursal Cumar Cismaan (AKHRISO)
Faarax Cali Nuur oo darawal u ahaa taliyihii hore ee NISA Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamuud, loona gacan geliyay ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa si cad u qirtay inuu isaga ka dambeeyay falkii dilka ahaa ee loo geystay kaaliyihii guddoomiyaha maxkamada sare ee Soomaaliya Mursal Cumar Cismaan.
Eedeysane Faarax Cali Nuur oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in isaga uu dilay marxuum Mursal Cumar Cismaan, isagoona dhinaca kale ku dooday in dilka aanu u dhicin si ula kac ah, balse uu ahaa mid si lama filaan ah ku dhacay.
“Aniga ayaa dilka geystay, ninkana nin iga dheer ma aheyn, waa nin walaalkey ah oo guri aan isla degeneyn, wixii qadarta ku dhici rabana ma jirto cid celin karta, waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo ehelkiisa inay i cafiyaan, nin kale iyo aniga ayaa murannay, ninkii kale intaan u socday ayuu isagii kasoo soke maray, xabadihiina isaga ayeey ku dhaceen.” Sidaasi waxaa yiri Faarax Cali Nuur.
Ehelada marxuumka la dilay ayaa ka codsatay dowladda federaalka Soomaaliya in eedeysane Faarax Cali Nuur la marsiiyo waxa uu sharciga Islaamka ka qabo.
Dhinac kale, ciidanka booliska Soomaaliyeed oo haatan gacanta ku haaya eedeysanaha ayaa sheegay inay dhawaan u gudbin doonaan maxkamada sare ee ciidamada, si kiiska ninkaan sharciga loo waafajiyo, balse odayaasha uu kasoo jeedo eedeysanaha ayaa haatan isku dayaya in arrinta lagu xaliyo qaab beeleed oo maxkamad aanan la tagin.